चिसो मौसममा बढी सताउने रोग निमोनिया : के हो, बच्ने कसरी ? | Ratopati
चिसो मौसममा बढी सताउने रोग निमोनिया : के हो, बच्ने कसरी ?
निमोनियाले फोक्सोमा आक्रमण गर्ने भएकोले यसलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन
personरातोपाटी डेस्क exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर २५, २०७७ chat_bubble_outline0
कोरोनाभाइरसको संक्रमणले थुप्रै किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरु निम्त्याउने गर्छ । तर तीमध्ये सबैभन्दा मुख्य चाहिँ निमोनिया नै हो । अरु कारणहरुले लाग्ने निमोनियाले अधिकांशतः मध्यमस्तरको असर गर्ने गर्छ । थोरै निमोनियामा मात्रै संक्रमितको फोक्सोमा गम्भीर असर पुग्ने गर्छ र कतिपयको त ज्यानै पनि जाने हुन्छ । तर अहिले महामारी फैलाइरहेको कोरोनाभाइरसको सन्दर्भमा भने निमोनियाको असर अलि फरक र खतरनाक खालको रहेको पाइन्छ । विशेषतः यसमा संक्रमितको छात्तीमा तीब्र असर हुने र छोटो समयमै फोक्सोमा धेरै मात्रामा वा पूरै क्षति पुग्ने गर्छ । यस अर्थमा पनि हामीले निमोनियाका बारेमा थाहा पाइराख्नु राम्रै हुन्छ । आउनुहोस्, आज हामी निमोनियाका बारेमा सामान्य चर्चा गरौं ।